ရွှေနိုင်ငံ: အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ သာဖတ်ပါရန်
Thi lay 21 March 2015 at 11:30
Anonymous 13 November 2015 at 14:09
ဆရာ သ​န္ဓေတည်​တဲ့အချိန်​က ဘယ်​အချိန်​ပါလဲဆရာ?ဆီးစစ်​တံကို ဆက်​ဆံပြီး ဘယ်အချိန်​မှာ စစ်​သင့်​ပါသလဲ?သမီးစစ်​တာ အခုထိ အနှုတ်​လက္ခဏာ ပြ​နေလို့ပါ
Anonymous 24 November 2015 at 19:35
ဆရာ မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကတားဆေးဖြတ်ထားတာ၁၀ရက်လောက်ရှိပါပြီတားဆေးဖြတ်ပီး၁၀ရက်အတွင်းတော့အတူနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမနေဖြစ်ပါဘူးဆရာဒါဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလားကိုယ်ဝန်ရလာရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြတတ်ပါသလဲဆရာကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
Anonymous 1 December 2015 at 10:41
ဆရာခင်​ဗျား....Ecee2ကို 1st pill နဲ့ 2nd pill ကြား 12နာရီခြားရတယ်​လို့ ကြားဖူးထားပါတယ်​ခင်​ဗျ။ ​ဆေးနှစ်​လုံးကြားအတူ​ထပ်ေ​နမိလျင်​ ကိုယ်​ဝန်​ရနိုင်​ပါသလားခင်​ဗျာ။ ​ကောင်​မ​လေးကတစ်​ပတ်​အကြာမှာ ​သွေးစွန်းရုံ ​ဘောင်းဘီမှာ​စွန်းတယ်​​ပြောပါတယ်​ခင်​ဗျာ။ ပူပန်​​နေရ​သော​ကြောင့်​ကိုယ်​ဝန်​ရနိုင်​ပါသလား​​ကျေးဇူးပြု ပြီး​ဖြေကြား​ပေးပါဆရာ။
Unknown 1 December 2015 at 23:31
Unknown9December 2015 at 16:49
Anonymous7January 2016 at 02:31
​နောက်​၂နှစ်​​​နေမှအိမ်​က​ပေးစားမှာပါ။​စေ့စပ်​ပြီး ​နောက်​ပိုငိး သမီးတို့ အတူ​နေမိပါတယ်​။လတိုင်းနီးပါးပါပဲ။​နေလိုက်​တိုင်း ကိုယ်​ဝန်​ရသွားမှာ စိုးရိမ်​​ပေမယ့်​ တစ်​ခါမှမရခဲ့ပါဘူး။ရာသီကသူ့ရက်​​ရောက်​ရင်​ပုံမှန်​လာတာပါပဲ။ဒါ​ပေမယ့်​ ဒီတစ်​ခါ​တော့ မလာဘူးဆရာ။၂ပတ်​​နောက်​ကျ​နေပြီဆရာ။​၃ ၊၄ရက်​​နောက်​ကျကတည်းက ​ကေသီပန်​​တွေ​သောက်​​နေတာ ၂ပတ်​နောက်​ကျတဲ့အထိပါပဲ။ဒါ​ပေမယ့်​မလာပါဘူး။​နောက်​မကျခင်​အထိ​တော့ အဖြူ​တွေအရမ်းဆင်းလို့၊အရမ်းယားလို့ ​ဆေး​သောက်​လိုက်​ရပါ​သေးတယ်​။အဲ့ဒါ သမီးကိုယ်​ဝန်​ရှိ​နေတာလား ဆရာ။​ကေသီပန်​​တွေ​သောက်​​နေတာအထုပ်​ရော ​ဆေး​တောင့်​​ရော အခွက်​၂၀ေ​ကျာ်​​နေပြီဆရာ။သမီးဝမ်းလည်းအရမ်းချူပ်​​နေပါတယ်​ဆရာ။က်ိုယ်​ဝန်​ရှိ​နေတာလား သို့ ​ရာသီလာတာ ​နောက်​ကျ​နေတာလား မသိလို့ပါ။​ကေသီပန်​ဆက်​​သောက်​ရမလား ဆရာ။ တား​ဆေး​သောက်​ရင်​မှီပါ​သေးသလား။​နောက်​ကျ​နေတဲ့ရက်​​တွေကလဲ အတူ​နေမိပါ​သေးတယ်​။
Unknown9January 2019 at 23:22
Unknown9January 2019 at 23:26
Anonymous 19 January 2016 at 00:08
အမျိုးသမီး အင်္ဂါမှာ အရည်​ကြည်​ဖူး​တွေထပီးယား​နေတာဘာလို့ပါလဲ လိင်​​ရောဂါလာ တား​ဆေး​သောက်​လို့ပါလား
Anonymous 19 January 2016 at 00:10
ဆရာအရင်​ကကျ​နော်​မိန်​မကEsse2 ​ဆေး​ဆေးကို​သောက်​ခဲ့ပါတယ်​ ခ​လေး​လေးရချင်​လို့​ဆေးမ​သောက်​တာ ၃လ​ကျော်​ပြီ ခုထိက​လေးမရဘူးဖြစ်​​နေတယ်​ဆရာကူညီပါအုံး ဆရာ
Unknown 29 January 2016 at 12:03
​ကောင်​မ​လေးနဲ့အ​​​​​နေပြီး အင်္ဂလိပ်​​ဆေးမ​သောက်​​စေချင်​လို့ သူများညွှန်​တဲ့ ကျားငါး​ကောင်​ တိုင်းရင်း​ဆေး​သောက်​​စေတာပါ. ​ခြောက်​လ​လောက်​က ပုံမန်​ပဲ အခု ဓမတာလာချိန်​ထိ မလာ​သေးလို့ဆီးစစ်​ကြည့်​တာ postive ပြ​နေတယ်​ဆရာ. ဓမတာလည်း လာသင့်​တာထက်​ ၁၀ရက်​​လောက်​ရှိ​နေပြီဆရာ ဘာလုပ်​ရမလဲခင်​ဗျ. လက်​ရှိအ​ခြေအ​နေနဲ့ လက်​ထပ်​ဖို့ကမဖြစ်​နိုင်​​သေးလို့ပါဆရာ.ကူညီ​ပေးပါလားဗျာ
Anonymous9March 2016 at 01:10
တား​ဆေး မ​သောက်​မီနဲ့​သောက်​ပီး၁နာရီ​လောက်​ဆီပဲခြားမယ်​ အတူတူ​နေခဲ့ပါတယ်​ က​လေးရနိုင်​လာသိဘူး ရခဲ့ရင်​လဲကိုယ်​ဝန်​မရ​အောင်​ဘာ​ဆေးဆက်​​သောက်​ရမလဲ အခုဆို အတူတူ​နေခဲ့ပီးတာ ၄ရက်​ပဲရှိပါ​သေးတယ်​ ​ပြောပြ​ပေးပါ
Unknown 22 March 2016 at 23:22
Anonymous 26 March 2016 at 07:17
ကိုယ်​ဝန်​ရှိတဲ့လက္ခာ​တေသိချင်​လို့ပါ ပီး​တော့ဘယ်​နှလမှာကိုယ်​ဝန်​ရှိမရှိသိတာပါလဲခင်​​ဗျ ဆီးမစစ်​ပဲကိုယ်​ဝန်​ရှိမရှိဘယ်​လိုခွဲခြားနိုင်​ပါလဲခင်​​ဗျ တကယ်​မသိတာ​ဖြေကြား​ပေးပါ
Unknown 30 March 2016 at 01:00
Unknown 30 March 2016 at 01:13
Unknown7May 2016 at 14:50
Unknown 8 April 2016 at 06:57
ဆရာ ဖယ်​ရိုဗစ်​​သောက်​ရင်​ က​လေး မရနိုင်​ဘူးလား က​လေးလိုချင်​လို့ပါ သမီးက ​သွေးအားနည်း​တော့ ဖယ်​ရိုဗစ်​က ​နေ့တိုင်း တစ်​လုံး ပုံမှန်​​သောက်​ရပါတယ်​ ဆရာ အဲ့တာ ဖယ်​ရိုဗစ်​​သောက်​တာ က​လေးရဖို့ခက်​သလား သိချင်​လို့ပါ ဆရာ ခက်​ခဲတယ်​ဆိုရင်​ ဖြတ်​လိုက်​မလို့ပါ ဆရာ ကူညီပါအုံး ဆရာ
Unknown 25 April 2016 at 10:49
ဆရာကျွန်​​တော့်​​ကောင်​မ​လေးနဲ့ ကျွန်​​တော်​နဲ့ စိတ်​နည်းနည်းလွတ်​ပြီး သူ့အဂါင်္ဇတ်​နဲ့ ကျွန်​​တော့အဂါင်္ဇတ်​နဲ့ ထိမိသွားပါတယ်​ ကျွန်​​တော်​နည်းနည်း​လေး​တော့ ​ကောင်​မ​လေးရဲ့အဂါင်္ထဲသွင်းမိတယ်​ ဒါမဲ့ မဖြစ်​သင့်​ဘူးဆိုပြီး ပြန်​ထုတ်​လိုက်​ပါတယ်​ ကျွန်​​တော်​ကမပြီးပါဘူး​ရှေး​ပြေးအရည်​​လေး​တော့နည်းနည်းထွက်​ပါတယ်​ ဆက်​ဆံတဲ့အဆင်​ထိ​တော့မ​ရောက်​ခဲ့ပါဘူး အဂါင်္ဝ​လောက်​ထိပဲ သွင်းမိတာပါ ​ကောင်​မ​လေးကရာသီလာပြီးတာ ၁၀ ရက်​​လောက်​​တော့ရှိပြီးပါပြီ ​ကောင်​မ​လေးမှာကိုယ်​၀န်​များ ရှိနိင်​ပါလားဆရာ ​ကျေးဇူးပြုပြီးစာပြန်​​ပေးပါဆရာ စိုးရိမ်​လို့ပါ
Unknown7May 2016 at 14:52
Unknown 8 May 2016 at 20:51
ဆရာ သမီးအရင်​ကဆို ရာသီလာ​စောတက်​ပါတယ်​။ ခုက အရင်​လထက်​ ၂ရက်​​လောက်​​နောက်​ကျ​နေပါပီ။ သမီး​ရော သမီးအမျိုးသားပါ က​လေးမလိုချင်​ကြ​သေးပါဘူး။ ဘယ်​လိုလုပ်​သင့်​တယ်​ဆိုတာ ဆရာရှင်းပြ​ပေး​စေချင်​ပါတယ်​ရှင်​။
ဆရာ ကွန်​ဒုံးနဆက်​ဆံရင်​ တား​ဆေး​သောက်​စရာလိုပါ​သေးလား​ဗျ
Unknown 11 June 2016 at 11:38
ဆရာ...အ​ရေး​ပေါ် ကိုယ်​ ဝန်​ ဖျက်​ ချ ချင်​ ရင်​...ဘယ်​ ​ဆေး သုံး ရလဲ ဆရာ...ကိုယ်​ ဝန်​က..၁ လ ​တောင်​ မပြည့်​ ​သေးပါဖူး ဆရာ
anamy 19 June 2016 at 00:57
Unknown 22 July 2016 at 10:50
ဆရာ ကျ​နော့်​​ကောင်​မ​လေးနဲ့အတူ​နေခဲ့ပါတယ်​..သူနဲ့​နေပြီး​နောက်​​နေ့ဆို တား​ဆေး(Marvelon)28လုံးပါတာ ​သောက်​ပါတယ်​ သူကလဆန်းရက်​ဆိုလာ​နေကြပါ ကျ​နော်​နဲ့က လကန်​ရက်​ကအတူ​နေခဲ့တာပါ ​ဆေးကလကုန်​ရက်​မှာ​သောက်​တာပါ လဆန်းရက်​ကြမလာပါဘူး ​နောက်​လလည်းမလာ​သေးပါဘူး ​ဆေးက​တော့ရက်​တိုင်းပုံမှန်​​သောက်​ပါတယ်​ ​ဆီးစစ်​ကြည့်​​တော့ တစ်​တန်းက ​ရေး​ရေး​လေးပဲ​ပေါ်ပါတယ်​ အခုဘာဆက်​လုပ်​သင့်​လည်း ဘယ်​​ဆေး​သောက်​သင့်​လည်း​ဖြေ​ပေးပါခင်​ဗျာ..
Unknown 22 July 2016 at 10:51
Unknown 22 July 2016 at 18:50
nge9August 2016 at 22:29
ဆရာ ရာသီမလာတာတော်တော်ကြာနေပါပြီ ရာသီပေါ်ဆေးထိုးတာလဲမလာသေးပါဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဖြေပေးပါဆရာ
maysitko@gmail.com 14 August 2016 at 11:57
ဆရာ သမီးက သမီးချစ်​သူနဲ့ ၃ ရက်​တစ်​ခါ​လောက်​​တွေ့ဖြစ်​ပါတယ်​
အဲဒါသမီးက Esse2 ကို လဲ ၃ ရက်​တစ်​ခါ​သောက်​ဖြစ်​ပါတယ်​
အဲဒါ အန္တရာယ်​ဖြစ်​နိုင်​လား သိချင်​လို့ပါရှင့်​
ကျွန်​မတို့ လက်​ထပ်​ပြီး က​လေး ယူမယ့်​ချိန်​မှာ​ကော
Anonymous 16 August 2016 at 04:20
ဆရာကျွန်​မရာသီ​သွေးကဟိုတစ်​လကမ​ပေါ်ဘူးဆရာအခုထိလဲမ​ပေါ်​သေးဘူးဆရာကိုဝန်​ရှိနိုင်​မဲ့​နေ့မှာမှားပီးအတူ​နေခဲ့မိတယ်​ဆရာကိုအ​လေးချိန်​လဲတိုးလာတယ်​ဆရာဆီးစစ်​ကြည့်​ချင်​လို့ဘယ်​အချိန်​မှာဆီးစစ်​ရင်​ကိုဝန်​အတိအကျ​ပေါ်မလဲသိ ချင်​ပါတယ်​ဆရာ...ဟိုတစ်​လကရာသီအနီဆင်းမဲ့အချိန်​မှာမဆင်းပဲအဖြူ​တွေအများကြီးဆင်းတယ်​ဆရာဝါဝါညိုညိုအ​ရောင်​​တွေလဲတစ်​ခါတ​လေဆင်းတယ်​ဆရာအာ့တာကိုဝန်​ရှိတဲ့လက္ခဏာ​တွေလားဆိုတာ​ဖြေကြား​ပေးပါရှင်​​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​please အ​ရေးကြီးလို့ပါဆရာ
Unknown 28 August 2016 at 15:28
ဆရာ သမီးအသက်​၂၄ပါ ချစ်​သူနဲ့ အတူ​နေp အကာကွယ်​မသုံးပဲလဲ​နေမိတယ်​ သုတ်​ရည်​​တွေနဲ့အထဲမှာ ပီးဖြစ်​ခဲ့တယ်​ ​ဒါ​ပေမဲ့ ၂ရက်​​လောက်​​နေ​တော့ ၁လတား​ဆေး​သောက်​လိုက်​တယ်​ ​နောက်​လရာသီလာ​တော့ ၁ရက်​တည်းလာပီး ရပ်​သွားတယ်​ ပုံမှန်​ဆို ၃ရက်​အနည်းဆုံးလာတာ ခု၁ရက်​ဆို​တော့ သမီးကိုယ်​ဝန်​ရှိမှာလဲ စိတ်​ပူသွားတယ်​ ​တား​ဆေး​ကြောင့်​လားလို့လဲသိချင်​​နေတယ်​ ရနိုင်​​ချေပိုများလားသိချင်​ပါတယ်​ ဆရာ ​ဖြေ​ပေးပါ​နော်​
ဆက်ဆံပြီး၂ရက်လောက်ကြာမှ ဓမ္မတာလာရင်ကော ကိုယ်ဝန်ရနိုင်လား(သုက်အနည်းငယ်ဝင်သွားခဲ့ရင်ပေါ့)
Unknown 11 September 2016 at 07:22
Unknown 11 September 2016 at 07:28
ဆရာသမီးချစ်​သူနဲ့မှာယွင်းခဲ့မိပါတယ်​ဆရာ သူအပြင်​မှာသုတ်​လွှတ်​ခဲ့ပါတယ်​ဆရာ အခုမလာတာတစ်​ပတ်​​ကျော်​​နေ ပါပြီဆရာ​ကေသီပန်​​​တွေ​သောက်​ထားပါတယ်​ဆရာ အဖြူ​တွေပဲဆင်း​နေပါတယ်​ဆရာ သမီးကိုယ်​ဝန်​ရနိုင်​ပါသလားဆရာ ရှိခဲ့ရင်​တားချင်​ပါတယ်​ဆရာဘာ​ဆေးသုံးရမလဲ​ဖြေကြား​ပေး​စေချင်​ပါတယ်​
Unknown 26 September 2016 at 07:00
ghost 27 September 2016 at 23:37
papa 20 October 2016 at 21:01
ဆရာ သမီးအသက်​က ၂၈နှစ်​ပါ ​ယောကျာ်းရှိပါတယ်​ အိမ်​​ထောင်​ကျတာ၁နှစ်​မပြည့်​​သေးပါဘူး သမီး ၃လခံ​ဆေးထိုးပါတယ်​ ရာသီအနည်းငယ်​လာပါတယ်​ ​ဆရာ လတိုင်းပါ စိတ်​ပူလို့ပါ က​လေးပြန်​ယူတဲ့အခါဆိုးကျိုးဖြစ်​နိုင်​ပါသလားဆရာ သမီးဖတ်​ဖူးတာက ၃လ ​ဆေးက ရာသီမလာဘူးလို့သိထားပါတယ်​ လာခဲ့ရင်​က​လေးရနိုင်​တာလားဆရာ ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ ဆရာ
Unknown 1 November 2016 at 22:18
Unknown 10 December 2016 at 21:03
ကိုယ်​ဝန်​တစ်​လကိုဖျက်​ချချင်​တာဘယ်​​ဆေးသုံးရင်​ အန္တရာယ်​ အကင်းဆုံးဖြစ်​မလဲမသိဘူး ဆရာ အ​ရေးကြ်ိး​နေလို့ပါ
Unknown 10 December 2016 at 21:08
Unknown 27 December 2016 at 05:03
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွှန်​​တော်​သိချင်​တာ​လေးတစ်​ခ​လောက်​​မေးပါရ​စေကျွှန်​​တော်အမျိုးသမ္မီးနဲ့ဆက်​ဆံပြီးနှတား​ဆေး​သောက်​တာကိုယ်​ဝန်​ရနိုင်​ပါသလားဆရာ တစ်​ကယ်​လို့ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​သွားတယ်​ဆိုရင်​​ကောသက်​သာ​အောင်​ဘာ​ဆေး​သောက်​သင့်​ပါသလည်းဘာလုပ်​သင့်​ပါသလည်းဆရာသိချင်​ပါတယ်​​ကျေးဇူးပါဆရာ
Unknown 16 January 2017 at 23:09
Unknown 18 January 2017 at 22:12
ဆရာ ကျ​နော့်​​ကောင်​မ​လေးနဲ့အတူ​​​မ.​နေဖြစ်​တာ ကြာပီဆရာ အရင်​ရက်​က​နေခဲ့​တော့​ဆေးတိုက်​ခဲ့ပါတယ်​ဆရာ ကျ​နော့်​အမျိူးသမီးခု ရာသီမလာ​သေးပဲ စားထားသမျှအန်​​နေပါတယိဆရာ ကျ​နော်​တို့လက်​ထက်​တာမကြာ​သေး​တော့က​လေးမလိုချင်​​သေးဘူးဆရာဘာဆက်​လုပ်​သင့်​လဲဆရာ
Unknown 16 March 2017 at 11:21
ဆရာ​ကျေးဇူးပြုပြီးသမီးကို​ဖြေ​ပေးပါရှင်​ သမီးအသက်​29နှစ်​ပါ သမီးက​လေးအရမ်းလိုချင်​လို့ပါရာသီစက်​ဝန်းကမမှန်​ပါဘူး၂လကိုတစ်​​ကြီမ်​ပဲ​ရာသီလာတာပါ OGသွားပြ​တော့ဆရာမက​ပြောတာဒါပုံမှန်​သမီးရဲရာသီစက်​ဝန်းပါတဲ့ဘာမှမဖြစ်​ဘူးလို့ဆရာမ​ပြောလိုက်​တယ်​ သမီးစိုးရိမ်​ပူပန်​တာကက​လေးမရနိုင်​မှာဆိုးလို့ပါ ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ရှင်​
Unknown 16 March 2017 at 11:56
Unknown 20 June 2017 at 10:19
Mrs.S S W 11 July 2017 at 23:25
ဆရာ ကျွန်မက ကိုယ်ဝန်ပျက်ကြတာ ၃ရက်ရှိပြီ ရင်သားက တင်းပြီးနာကျင်တယ် ဘာဆေးသောက်ရမှာလဲ
Unknown 30 August 2017 at 10:03
ဘာ​ဆေးကို သုံးပီ ပျက်​ကျတာ လဲ အစ်​မ သိရင်​ ​ပြောပြပါ အ​ရေကြီးလို့ပှါု
Unknown 24 September 2017 at 20:33
Unknown5January 2018 at 22:41
လက်​ထပ်​ပြီရင်​ ချစ်​သူက အတူ​ပေးမ​နေဘူး က​လေးရမှာ ​ကြောက်​လို့တဲ့ ဆရာ သူက က​လေး ​စော​စော မလိုချင်​​သေးလို့
အဲ့ဒါ သဘာဝ လင်​မယား အတိုင်း​နေပြီး က​လေးမရ​အောင်​ ဘယ်​လို ​စောင့်​ထိန်းရမလဲ ဆရာ လမ်းပြ​ပေးပါ ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ ဆရာ။
Luuchaw7February 2018 at 21:47
ဆရာ ကျွန်တော တစ်ခုလောက် မေးပါရစေ ကာမ စိတ် ပျင်းပြမူကြေင့် မိန်းမ မယူရင်ကဆို တစ်ရက်ထဲ လေးငါးခါလောက် စိတ်ဖြေဘူးပါတယ် မိန်းမ ရပြီးတော့လည်း စိတ်ဖြေတဲ့ အကြင့် က မပျောက်ဘူး တစ်ခါလေး နစ်ခါ သုံးခါ စိတ်ဖြေ မိတယ် အခု ကလေး လိုချင်လို့ ဆိုးကြိုးတွေ ရှိနိုင်လား ဖြေ ပေးပါနော်
Luuchaw7February 2018 at 21:48
Zaw Zaw7August 2019 at 15:26
ဆရာ ကျွန်​​တော်​တို့ လင်​မယား အိမ်​​ထောင်​သက်​ ၁၀ နှစ်​​ကျော်​ပါပြီ
​ဆေးရုံ​ဆေးခန်း သွား​တော့ အာထွာ​ဆောင်း ရိုက်​
​နောက်​ပိုင်း ​ဆေးရုံ​ဆေးခန်း မသွားခြင်​​တော့ဘူး
​သေ​သေချာချာ စစ်​​ဆေး​ပေးတဲ့ ​ဆေးရုံသိချင်​ပါတယ်​
​ဆောင်​ရရန်​​ရှောင်​ရန်​​လေး​တွေး က အစ
kubrahameed 15 November 2019 at 19:44
Myanmar Idol Season4Top Result Live Full Show
Myanmar Idol Season4Live Full Show
Pakistan Education News Read Online Books NTS Results
Unknown 28 November 2019 at 11:18
ကြှနျတျောတဈခုလောကျမေးခငျြးလို့ပါဆရာ ကြှနျတျောကောငျးမလေးအတူနပေီ ၁ရကျလောကျနမှောဆေးသောကျတာ ကိုယျ့ဝနျးရနိုငျလာဗြာ ပီတော့ကြှနျတျောရဲ့သုတျကိုသူအထညျ့မထညျ့ပါဘူး
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်လာဖို့
၂၀၁၄အတွင်း တပြည်လုံး အပစ် ရပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရ